Madaxweyne KX Camey: “Gaas aniga, guddoonka barlamaanka iyo odayaasha dhaqankaba nagalama tashan guddiga uu magacaabay” (waraysi) – Radio Daljir
Madaxweyne KX Camey: “Gaas aniga, guddoonka barlamaanka iyo odayaasha dhaqankaba nagalama tashan guddiga uu magacaabay” (waraysi)
Diseembar 3, 2018 8:37 g 0
Madaxweyne Kuxigeenka Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey oo waraysi wacaal daray ah caawa siiyey Radio Daljir ayaa si kulul uga hadlay magacaabidii uu maanta Madaxweyne Gaas magaacaabay Guddiga Ansixinta iyo Xallinta Khilaafaadka Doorashada Puntland.
Camey ayaa sheegay in Gaas markii uu magacaabayey guddiga uusan wax waddatashi ah la samayn asaga oo ah Madaxweyne Kuxigeen Puntland, Hoggaanka Barlamaanka, waxgaradka Puntland, iyo waliba odayaasha dhaqanka. Arrinkaas ayuu Madaxweyne Kuxigeen Camay ku tilmaamay in uu yahay mid aan maanta Puntland looga dulqaadan karin.
Madaxweyne Camay ayaa Radio Daljir la qaybsaday in markii uu arkay la tashi la’aanta Madaxweyne Gaas uu asagu latashi la sameeyey musharrixiinta xilka madaxweyne ee Puntland iyo waliba odayaasha dhaqanka Puntland, uuna hadda magacaabay guddi sax ah oo loo dhanyahay.
“Tallaabada aan qaaday waa mid lagu qanci doono, balse tan Madaxweyne Gaas uu sameyeey ma aha mid lagu qanci karo,” ayuu yiri Camey.
Madaxweyne Kuxigeen Camey ayaa sheegay in khilaafkan uusan waxba u dhimi dooniin doorashada Puntland ee bisha Janaayo 2019, isla markaana uu rajaynayo in khilaaf oo dhan xal loo heli doono.
Hoos kaga bogo waraysiga Daljir ee Madaxweyne Kuxigeen Camey.